Yosua 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
9 Afei bere a ahene+ a wɔwɔ Yordan agya wɔ bepɔw so ne Sefela ne Po Kɛse+ no ano wɔ Lebanon+ anim, Hitifo,+ Amorifo, Kanaanfo,+ Perisifo,+ Hiwifo ne Yebusifo+ tee nea asi no, 2 wɔka boom yɛɛ nokoro sɛ wɔne Yosua ne Israelfo no bɛko.+ 3 Na Gibeonfo+ nso tee nea Yosua de yɛɛ Yeriko+ ne Ai+ no. 4 Wɔn de, wɔyɛɛ wɔn ade nyansam.+ Wɔfaa akwansoduan ne nkotoku dedaw ne nsã kotoku a atetew a wɔapompam+ guu wɔn mfurum so. 5 Afei wɔhyehyɛɛ mpaboa a ahi a wɔapompam ne ntadegow, na paanoo a wɔfae nyinaa akyenkyen na efurofurow. 6 Na wɔkɔɔ Yosua nkyɛn wɔ asoɛe hɔ wɔ Gilgal,+ na wɔka kyerɛɛ ɔne Israel mmarima no sɛ: “Yefi akyirikyiri na yɛaba. Yɛsrɛ mo, mo ne yɛn nyɛ apam.”+ 7 Ɛnna Israel mmarima no ka kyerɛɛ Hiwifo+ no sɛ: “Ebia yɛn mpɔtam ha yi ara na mote. Enti ɛbɛyɛ dɛn na yɛne mo ayɛ apam?”+ 8 Na wɔka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Yɛyɛ wo nkoa.”+ Ɛnna Yosua bisaa wɔn sɛ: “Moyɛ nnipa bɛn, na mufi he?” 9 Afei wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nkoa fi akyirikyiri+ na yɛaba, Yehowa mo Nyankopɔn din+ nti; yɛate ne nka ne nea ɔyɛe wɔ Egypt nyinaa,+ 10 ne nea ɔde yɛɛ Amorifo ahene a na wɔtete Yordan agya nohoa no, Hesbon hene Sihon+ ne Basan hene Og+ a na ɔte Astarot+ no. 11 Enti yɛn mpanyimfo ne ɔmanfo no nyinaa ka kyerɛɛ yɛn sɛ,+ ‘Momfa akwansoduan na munkohyia wɔn nka nkyerɛ wɔn sɛ: “Yɛyɛ mo nkoa.+ Enti mo ne yɛn nyɛ apam.’”+ 12 Monhwɛ yɛn paanoo yi; da a yɛresim aba mo nkyɛn a yɛfa fii yɛn afie sɛ akwansoduan no, na ɛyɛ hyew, nanso seesei akyenkyen na efurofurow.+ 13 Na nsã kotoku yi nso, na ɛyɛ foforo koraa, nanso monhwɛ sɛ atetew.+ Na kwan no tenten nti, yɛn ntade ne yɛn mpaboa nso atetew.” 14 Afei Israel mmarima no faa akwansoduan no bi hwɛe, na wɔammisa Yehowa anom asɛm.+ 15 Yosua ne wɔn dii no asomdwoe so+ na ɔne wɔn yɛɛ apam sɛnea wobenya wɔn ti adidi mu. Enti asafo no mu mpanyimfo+ no kaa wɔn ntam.+ 16 Wɔne wɔn yɛɛ apam no wiei no, nnansa akyi na wɔtee sɛ nkurɔfo no te bɛn wɔn wɔ wɔn mpɔtam hɔ ara. 17 Afei Israelfo no tui, na da a ɛto so abiɛsa no, wokoduu wɔn nkurow mu. Nkurow no ne Gibeon+ ne Kefira+ ne Beerot+ ne Kiriat-Yearim.+ 18 Na Israelfo no amfa wɔn nsa anka wɔn, efisɛ na asafo no mu mpanyimfo de Israel Nyankopɔn Yehowa din+ aka wɔn ntam.+ Afei asafo no nyinaa fii ase nwiinwii hyɛɛ mpanyimfo no.+ 19 Na mpanyimfo no nyinaa ka kyerɛɛ asafo no sɛ: “Yɛde Israel Nyankopɔn Yehowa din aka wɔn ntam, enti yɛrentumi mfa yɛn nsa nka wɔn.+ 20 Eyi na yɛbɛyɛ wɔn na wɔanya wɔn ti adidi mu na ntam a yɛaka wɔn no ho nnome biara amma yɛn so.”+ 21 Enti mpanyimfo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnyaa wɔn mma wɔntena ase na wɔnkɔ anyina ne nsu mma asafo no+ nyinaa, sɛnea mpanyimfo ahyɛ wɔn bɔ no.”+ 22 Afei Yosua frɛɛ wɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na modaadaa yɛn kae sɛ, ‘Yɛne mo ntam kwan ware yiye,’+ bere a mote yɛn mpɔtam ha yi ara?+ 23 Ɛnnɛ wɔadome mo,+ na mo nkwa nna nyinaa mobɛyɛ nkoa+ wɔ me Nyankopɔn fie, na morennyae anyina ne asukɔ da.”+ 24 Ɛnna wobuaa Yosua sɛ: “Asɛm no ne sɛ wo nkoa tee sɛ Yehowa wo Nyankopɔn ka kyerɛɛ n’akoa Mose sɛ ɔmfa asase yi nyinaa mma mo na monsɛe asase no sofo nyinaa mfi mo anim,+ na mo nti, na yesuro ma yɛn kra.+ Ɛno nti na yɛyɛɛ saa no.+ 25 Afei yɛn ni, yɛwɔ mo nsam. Nea eye na ɛteɛ wɔ mo ani so biara momfa nyɛ yɛn.”+ 26 Na ɔyɛɛ wɔn saa gyee wɔn fii Israelfo no nsam, na wɔankum wɔn.+ 27 Enti da no Yosua yɛɛ wɔn+ anyina ne nsu kɔfo maa asafo+ no ne Yehowa afɔremuka no, baabi a ɔbɛpaw biara,+ de besi nnɛ.